April 2013 ~ IT Guide Myanmar
အွန်လိုင်းမှာ စာဖတ်ချင်လို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီငယ်ညီမငယ်များအတွက် အလင်းကမ္ဘာ မှဒီပို့(စ်)လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။
*** သူငယ်ချင်းတို့ရေ အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ...
အဝေးရောက် ညီအကိုမောင်နှများအတွက်ရည်းမှန်းပြီး ဒီပို့စ်လေးကို ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် စာပေဝါသနာပါသူအားလုံးအစဉ်ပြေ
ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် အားလုံးရဲ့ဆန္ဒပြည်စေခြင်တာပါ...........
ကံချွန် – အပျိုစင်တို့သိဖို့2(06/27)
ကံချွန် – အပျိုစင်တို့သိဖို့ ၃ (06/27)
ကံချွန် – အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် (Nov 11, 2008)
ကံချွန် – မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း (Nov 11, 2008)
ကံချွန် – ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (Nov 11,2008)
ကံချွန် – ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ (Nov 11,2008)
ကံချွန် – ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ (Nov 11,2008)
ကျော်ဝင်း – စိန်ခေါ်ကြသူများ(06/28)
ချစ်စံဝင်း – တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား
ချစ်ဦးညို – အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကိုမောင်သွားထားလေမလား (07/29)
ချစ်ဦးညို – ရုက္ခစိုးနဲ့ အခြား ပြိတ္တာများ (08/06)
ချစ်ဦးညို – ရာဇကုမာရ (08/06)
ချစ်ဦးညို – ၀ိသာခါနှင့်သီတာ (08/06)
ချစ်ဦးညို – စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ (08/06)
ချစ်ဦးညို – ရှင်စောပု (08/06)
ချစ်ဦးညို – မလေးမဏိစန္ဒာ (08/06)
ချစ်ဦးညို – လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း (08/06)
ချစ်ဦးညို – နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် (08/06)
ချစ်ဦးညို – ချစ်သောပါဒဧကရီ (08/06)
ချစ်ဦးညို – ချစ်သူမင်းနန္ဒာ (08/06)
ချစ်ဦးညို – ယာဇ (08/06)
ချစ်ဦးညို – စာမရီသို့ထူးထူးခြားခြား (08/06)
ချစ်ဦးညို – မဏိစန္ဒာဥဒါန်း (08/06)
ချစ်ဦးညို – မဟာသေနာပတိ.(08/06)
ချစ်ဦးညို – အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ (08/06)
ချစ်ဦးညို – သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ (08/06)
ဆောင်းဝင်းလတ် – ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် (06/28)
ပြည့်ပိုင်မူးအိမ် – ကျူးပစ်ဒ်၏ရင်ဖွင့်မြှား
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ကုန်ကြမ်း (0ct 10, 2008)
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ပန်းနုရောက်ပြကွက်ထဲက ကကြိုးလှတဲ့သတို့သမီး (oct 16, 2008)
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – သတ္တမမြောက်နတ်သမီး ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ခြံခုန်တဲ့ကြယ် ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – အချစ်နဲ့နက္ခတ် ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – နွေရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ချစ်သူကိုတိုင် သွန်းခတ်ခဲ့သောသစ်သီးများ ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – အချစ်ကိုကြက်ခြေမခတ်ကြေး ( oct 16, 2008 )
မဟာဆွေ – အင်္ကျီပါး (Nov 28, 2008)
မဟာဆွေ – သူပုန်ကြီး ( Nov 28, 2008)
မဟာဆွေ – စာရေးကြီး (Nov 28, 2009)
မင်းခိုက်စိုးစန် – ချောင်းကြည်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည (06/27)
မင်းခိုက်စိုးစံ – စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်(08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ – ခေတ်တစ်ခု၏အစ အဓိပါယ်တစ်ခု၏အဆုံး (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ – သုည (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ – ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် လမ်းဆုံ (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစံ – ကော်ဖီည (08/19)
မင်းခိုက်စိုးစန် – ကလေးအတွေး (08/19)
မင်းလူ – သင်္ခါရများ
မင်းလူ – ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ (06/26)
မင်းလူ – အချစ်လို့အဓိပါယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ (06/26)
မင်းလူ – ငိုအားနဲ့ရယ်အား (06/27)
မင်းလူ – ခြေစစ်ပွဲများ – ၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ – အဖွားကြီးသုံးယောက်နဲ့စကားပြောခြင်း (၀တ္ထုတို) ( 06/26)
မင်းလူ – ဒေ၀တာမြို့တော်-၀တ္ထုတိုို (06/27)
မင်းလူ – အီးကော်လံ-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ – လေထန်ဖုန်း-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ – ညာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ-၀တ္ထုတို(06/27)
မင်းလူ – ဖူးစာရှင်ကိုရွေးတော့မည်-၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ – ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် – ၀တ္ထုတို (06/27)
မင်းလူ – ချစ်မြှားရှင်အစ ချစ်မြှားရှင်အဆုံး (Nov 28, 2008)
မင်းသိင်္ခ – မ “တတ်ပါ့” (07/20)
မင်းသိင်္ခ – မြိုင်ဟေ၀န် (07/24)
မင်းသိင်္ခ – ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း၁ အပိုင်း ၂ (07/24)
မင်းသိင်္ခ – တစ်ပွဲစားဦးနှော အပါအ၀င် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/24)
မင်းသိင်္ခ – မိုးနဲ့အတူ (07/24)
မင်းသိင်္ခ – ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြိုင်မဟာမမြလေး (07/24)
မင်းသိင်္ခ – ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂ (07/24)
မင်းသိင်္ခ – မအောင်ရင် ( 07/24)
မင်းသိင်္ခ – ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ ပျားဆွဲသောမုတ်ဆိတ် (07/24)
မင်းသိခ် – မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော (Nov 28, 2008)
မြသန်းတင့် – လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့်၊သက်အောင် – သမိုင်းစကားပန်းစကားနှင့် အခြားရသစာတမ်းများ (07/29)
ဲမြသန်းတင့် – လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် – ဂျူပီတာဖိုက် (07/08)
မြသန်းတင့် – မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ (07/29)
မြသန်းတင့် – ကြာညိုနံသင်းသောရေ၀တီမ (07/29)
မြသန်းတင့် – ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် (07/29)
မြသန်းတင့် – တိမ်းရှောင်သူ (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် – ၏ကရီဖွားစော (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် – စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (ဘာသာပြန်) (07/08)
ဲမြသန်းသင့် – လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်း ကြည့်ခြင်း (07/29)
ဲမြသန်းတသင့် – သြဂုတ်တစ္ဆေ နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/29)
မြသန်းတင့် – ရေပွက်ပမာ .. (07/29)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။(06/28)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် (06/27)
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ပညာရဲ့ သဘော (07/16)
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည် (07/16)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ် (Nov 28, 2008)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် (Nov 28, 2009)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – လွမ်း (Nov 28, 2008)
တာရာမင်းဝေ – ပန်းခေတ်ကလမင်း
တာရာမင်းဝေ – ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ
တာရာမင်းဝေ – လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ – ရှူး (oct 11, 2008)
တာရာမင်းဝေ – သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ (oct 11, 2008)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ရုပ်ထုကျိန်စာ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ရွှေစင်နတ်ဘုရား (ဘာသာပြန်) (09/03)\_
ဒဂုန်ရွှေမျှား – စောရသက်ပြင်း (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ငယ်ကချစ်အနှစ်တရာ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ကျွန်းမင်းသား (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်သူ (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ကဗလာနီအောက်ဝယ် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ထောင်မင်းသား ဦးဘိုးထော် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင် (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ချစ်သွေးဧကရီ(09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – ဘ၀မုန်တိုင်း (09/03)
ဒဂုန်ရွှေမျှား – မေ၀ါ၏ကလဲံ့စား (09/03)
နန္ဒ – လေးရူးသုန်သုန် (ဘာသာပြန်) (07/29)
နီကိုရဲ – ဇွတ်
နီကိုရဲ – ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ
နီကိုရဲ – ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ (06/27)
နီကိုရဲ – နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။ (07/08)
နီကိုရဲ – လှည့်စား (07/08)
နီကိုရဲ – အိုးလေး – (oct 11, 2008)
နတ်နွယ် – ကမ္ဘာစာပေ တစေ့တစောင်း (08/28)
နတ်နွယ် – ရတနာလှိုဏ်ဂူ (ဘာသာပြန်) (08/28)
နတ်နွယ် – မိုဗစ်ဗီးယား၏ အတိုင်းအတာနဲ့ အခြားဝတ္ထုတိုများ (08/28)
နတ်နွယ် – ရေအောက်တစ္ဆေ (ဘာသာပြန်)
နတ်နွယ် – အလည်လာတဲ့မိန်းကလေးရယ် (08/28)
နတ်နွယ် – မင်းမှာသစ္စာလူမှာကတိ (ဘာသာပြန်) (08/28)
နတ်နွယ် – ဒက်ဇယ်လာ (08/28)
နွမ်ဂျာသိုင်း – တစ်မျိုးညာနွဲ့ သွေမဖယ် ပိုးပါနဲ့မေရယ် (Nov 28, 2008)
နွမ်ဂျာသိုင်း – နွေလေကညင်း (Nov 28, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – ဆော်လမွန်သိုက် (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – သူရဲကောင်းသုံးယောက် အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ အပိုင်း၃ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – ဆင်စွယ်မင်းသမီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – ရတနာပုံ (Nov 25,2008)
ရွှေဥဒေါင်း – အတွေးအမြင်နှင့် ရှူထောင့် (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့ အတွေးအခေါ်များ (Nov 25, 2008)
ရွှေဥဒေါင်း – မြသက်မော် (Nov 25, 2008)
လယ်တွင်းသားစောချစ် – ပန်းများကိုမွေးစေသူ (07/04)
၀တ္ထုတိုများ – ဆရာစုံ (06/26)
ဝေမူးသွင် – ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့ကြယ် ( oct 09, 2008 )
ဝေမူးသွင် – စိတ်ကောက်နတ်သမီး (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – ကျူးပစ်ဒ်ကိုတိုင်မသိတဲ့ မြှားတစ်စင်းအကြောင်း (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – သံယောဇဉ်ဖတ်စာ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – လူပျောက်ကြော်ုငြာ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – တစ်ခါတစ်ရံများ (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြ င် (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – စက္ကုပန်းတွေရဲ့သီချင်း (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – အသဲကွဲလူရွင်တော် (oct 09,2008)
ဝေမူးသွင် – အဆင့်မြင့်ချည်တိုင် (oct 09,2008)
သုခ – ဒီဆောင်းဟေမာန် (Nov 28,2008)
သုခ – ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား (13 January, 2009)
သိပ္ပံမောင်ဝ – အဟိတ်…၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ (06/28)
သိပွံမောင်ဝ – စစ်အတွင်းနေစဉ်မှတ်တမ်း (Nov 28, 2009)
အကြည်တော် – စွယ်စုံလက်ဆောင်
အကြည်တော် – လှအိုးကွဲ
အကြည်တော် – သံသရာရထား
အကြည်တော် – ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည (06/27)
အကြည်တော် – ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ် (06/27)
အကြည်တော် – သဲလှည်း(06/27)
အကြည်တော် – အိမ် အပိုင်း(၁) ( 06/27)
အကြည်တော် – အိမ် အပိုင်း(၂) -(06/27)
အကြည်တော် – အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့် … (07/04)
အကြည်တော် – ရီတန်းအောဖ့်ဘီလုး (07/05)
အကြည်တော် – ကျွန်တော်ထောင်းသောပေါင်များ (09/07)
အကြည်တော် – ပိုးကောင်များ (09/07)
အကြည်တော် – မိုးတိ်မ်ပုံပြင် (09/07)
အကြည်တော် – တောသားကြီး (09/07)
အကြည်တော် – တခါက .. ငယ်ငယ်လေးတွေ (09/07)
အကြည်တော် – ကဝေပျိုနိဒါန်း (09/07)
အကြည်တော် – ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် (09/07)
အကြည်တော် – ပြတ်ထွက်သွားသော ကျောရိုးဆစ်လေးများ (09/07)
အကြည်တော် – နတ်နေကိုင်း (09/07)
အကြည်တော် – ရွှေမိုးသည်း (09/07)
အကြည်တော် – ခင်မှုန်မင်္ဂလာဆောင် (09/07)
အကြည်တော် – ဟဒယတက်ကျမ်း (09/07)
အကြည်တော် – ဇော်က . ကနေသည် (09/07)
အကြည်တော် – နတ်ပြည် နံနက်ခင်း (09/07)
အကြည်တော် – ဘီလူး (09/21)
အထင်ကရ – မင်းနဲ့ကိုယ် (Nov 28, 2008)
အထင်ကရ – ကောင်လေးချစ်တဲ့သူ (Nov 28, 2008)
အထင်ကရ – သူဖန်ဆန်းတဲ့သင်္ကြန် (Nov 28, 2009)
အီကြာကွေး – တွေ့ရကြုံရရှတတလေးတွေ (06/30)
အီကြာကွေး – နတ်ရူးတို့ကြောင်နိုင်ပါပေ့ (06/30)
ကလျာ – ဆောင်းဆည်းဆာ(Dec 23, 2008)
ကြည်အေး – မိ(06/28)
ကြည်အေး – အပြင်ကလူ(06/28)
ကြည်အေး – နွမ်းလျအိမ်ပြန် (Dec 23, 2008)
ကြည်အေး – ကျွန်မပညာသည် (Dec 23, 2008)
ဒဂုန်တာရာ + ကြည်အေး – စမ်းမြညတစ်ည (Dec 23, 2008)
ခင်ခင်ထူး – ဆံရစ်ဝိုင်း ၀တ္ထုတိုများ (Dec 23, 2008)
ခင်မျိူးချစ် – ကိုင်းပြောလိုက်စမ်းကွယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ (Dec 23, 2008)
ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း – ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ (06/30)
ခင်ဆွေဦး – ဒို့တိုင်ဌာနီ (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု – လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု – မွှေး (Dec 23, 2008)
ခင်နှင်းယု – ဘယ်လိုသောအကြောင်းကြောင့်( Dec 23, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး – သွေး (07/04)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး – မုန်း၍မဟူ (07/04)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး – အဖြူ (၀တ္ထုတို) (Nov 28, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး – မေ့အိမ်မက် (Dec 23, 2008)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး – ပျိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မိုး( ၀တ္ထုတို)(Dec 23, 2008)
ဂျူး – ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့
ဂျူး – လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာ
ဂျူး – ကံကြမာကိုမယုံကြသူများ
ဂျူး – ကျွန်မ၏သစ်ပင် (06/30)
ဂျူး – ကျွန်မချစ်တြဲ့မို့တစ်မြို့ (06/31)
ဂျူး – ချစ်သူရေးတဲ့ကျွန်မ၏ည (06/31)
ဂျူး – မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် (06/30)
ဂျူး – ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်ြး ဖူ (06/30)
ဂျူး- ကျွန်မတို့မိန်းမတွေ – ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – ရဲရင့်သော နှလုံးသား-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – တွေ့ချင်လှပြီ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျုး – အ၀ါရောင်ရထား (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး -ရေမျောသီး – ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – ဖျားနေတဲ့မြို့-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – နာမည်နဲ့အသက်-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – အနှပညာရှင်များနဲ့စံလက်ရာများ – ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – လေထဲမှာကပျံဝဲကျသူများ (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး – ကောင်းကင်မပါသောည (၀တ္ထုတို) (06/30)
ဂျူး – သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို)
ရသလောက်လဲ Shared ပေးလိုက်ပါတယ်….
ကွန်ပျူတာသုံးစွဲ သူုတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေ
ကွန်ပျူတာသုံးစွဲ သူုတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကဲ စတင်လိုက်ကြရအောင်လား ………….. …
Task Manager ကို ဖျောက်ခြင်း ၊ ဖော်ခြင်း
Task Manager ကို ပြန်ဖော်ဖှုိ့ က -
Start >> Run >> gpedit.msc လို့ ရိုက်ပြီး enter နိုပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Administrative Templates >> System >> Ctrl+Alt Del Option ကို ကလစ်နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ညာဘက်အကွက်ထဲက Remove Task Manager ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Disabled ကိုရွေးပြီး Apply >> Ok ဆိုရင်ရပါပြီ ။
Task Manager ကို ဖျောက်ထားချင်ရင် Enabled ကိုေ၇ရွးလိုက်ရင် ရပါတယ်
Search Program ကို ဖျောက်ခြင်း ၊ ဖော်ခြင်း
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွန်ပျူတာရဲ့Search Program ကို ဖျောက်ချင် ဖော်ချင်သူများ အတွက်
Search Program ကို ပြန်ဖော်ဖို့ က
Star >> Run >> gpedit.msc လို့ ရိုက်ပြီး enter နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် Administrative Templates >> Windows Explorer ကို ကလစ်နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ညာဘက်အကွက်ထဲက Remove Search menu from Start Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Disabledကိုရွေးပြီး Apply >> Ok ဆိုရင် ရပါပြီ
Search Program ကိုဖျောက်ထားချင်ရင်တော့ Enabled ကိုရွေးပေးရင်ရပါတယ် ။
Floder Option ကိုဖျောက်ခြင်း ၊ ဖော်ခြင်း
Floder Option ပြန်ဖော်ဖို့ နည်းလမ်းကတော့ ဒီလို ပါ ။
Star >> Run >> gpedit.msc လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် Administrative Templates >> Windows Components >> Windows Explorer ကို ကလစ်နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ညာဘက်အကွက်ထဲက
Remove the Floder Option menu item from the tools Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Disabled ကိုရွေး ပြီး Apply >> Ok ဆိုရင် ရပါပြီး ။ ဒါက Tool ထဲက Floder Option အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ Folder Option ကို ဖျောက်ထားချင်ရင် Enabled ကိုရွေးလိုက်ရင် အိုကေသွားပါလိမ့်မယ် ။
Desktop Background ကို ပြောင်းလို့ မရအောင် ၊ ပြောင်းလို့ ရချင်ရင်
Desktop Background ကို မပြောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်အမြဲထားချင်တဲ့ပုံကို အရင်ပြောင်းထားပါ ။ ပြီးရင် လို့ ရိုက်ပြီး နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် Start >> Run >> gpedit.msc လို့ ရိုက်ပြီး Enter ကို နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် Administrative Templates >> Desktop >> Acitive Desktop ကို ကလစ်နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ညာဘက်အကွက်ထဲက Administrative Desktop Wallpaper ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Enabled ကိုရွေးပြီး Wallpaper Name ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုခုရိုက်ထည့်ပါ ။ ဥပမာ - အစက်တစ်စက်ဖြစ်ဖြစ်
ပြီးရင် Apply >> Ok ဆိုရင် Desktop Background ကို တခြားပုံ ပြောင်းလို့ မရတော့ပါဘူး ။ ပြန်ပြီးပြောင်းလို့ရချင်ရင် Not Configuard ကို ပြန်ရွေးပေးပါ ။
Registry ကို ဖျောက်ခြင်း ၊ ဖော်ခြင်း
Registry ကို ပြန်ဖော်ခြင်း
Start >> Run >> gpedit.msc လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် Administrative Templates >> System ကို ကလစ်နှိပ်ပါ ။ ပြီးရင် ညာဘက်အကွက်ထဲက Prevent Access to registry editing tools ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Disabled ကို ရွေးပြီး Apply >> Ok ဆိုရင် ရပါပြီ ။ ဖျောက်ထား ချင်ရင်တော့ Enabled ကို ရွေးပေးပါ ။
Run Box ကို ဖျောက်ခြင်း ၊ ဖော်ခြင်း
သူများတွေကို စ ချင်သူများအတွက် Run Box ကို ဖျောက်ထားချင် ဖော်ချင်ရင် --
ဒီတစ်ခါတော့ Run Box မှာ group policy ကို ရိုက်မရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ Windows + R နှိပ်လည်း မရတော့ဘူး ။ Run Box ဖျောက်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ သွားကြည့်ရအောင် ။
My computer >> Drive( c) >> windows >> System 32 >> gpedit.msc ဆိုတာကိုတော့ တွေ့ အောင်ရှာပြီးဖွင့်ပါ ။ ပြီးရင်တော့ Administrative Templates >> Start Menu and Taskbar ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ညာဘက်အကွက်ထဲက Remove Run Menu From Start Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Disabled ကိုရွေးပြီး Apply >> Ok ဆိုပြန်ပေါ်လာပါတယ် ။ Run Box ကို ဖျောက်ထားချင်ရင် Enabled ကိုေ၇ွးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေ သွားပါလိမ့်မယ် ။
အားလုံးပဲကွန်ပျူတာကို ဒီထက်ပိုမုိကလိနိုင်ကြပါစေနော် ။
Net Guide Journal ( 18 JUNE 2011 ) ထုတ်မှ စာရိုက်မျှဝေပေးခြင်း ။
Credit to: ကွန်ပြူတာနည်းပညာ
ဝင်းကမ္ဘကျော် မှ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြပေးသည်။
HTC Desire C Root Guide
Disclaimer: All the tools, mods or ROMs mentioned below belong to their respective owners/developers. We (OAK Developer Team) or the developers are not to be held responsible if you damage or brick your device.
Download and install HTC Sync Manager, by clicking here.
Download this file and copy it to your phone, without extracting.
1) Unlocking your bootloader
Your phone battery should be 80-85% charged. If your phone goes off suddenly because of battery, during flashing ROMs or installing mods and updates — your phone might go dead permanently.
Backup all your important data that you might need because unlocking your bootloader will delete/wipe all your data.
This tutorial is only for unlocked HTC phones. Carrier / network locked HTC phones are not supported by this tutorial.
Step 1: Go to HTCDev.com website and register.
Step 2: Click on “Unlock Bootloader” button and click the “Get Started” button.
Step 3:Select “All Other Supported Models” from the dropdown list and then click the “Begin Unlock Bootloader” button.
Step 4: Read the warning popup message and then press the ‘Yes’ button.
Step 5: Check both the boxes in the Legal Terms popup box. Now press the “Proceed to Unlock Instructions” button.
Step 6: Download Fastboot files and extract them.
Step 7: Hold the Power button on your HTC device for 10 seconds to completely turn it off.
Step 8: Press Volume Down and Power to start the device into Bootloader mode.
Step 9: Use the Volume buttons to select up or down. Highlight Fastboot and press the Power button to select.
Step 10: Connect your HTC device to the computer viaaUSB cable.
Step 11: Click the Start button and type ‘cmd’ (without quotes) and press Enter.
Step 12: In the Command Prompt window, type the following command and press Enter.
Step 13: Now type the following command and press Enter.
Step 14: You will seealong string of text (identifier token). What to do now? Open this page on HTCDev.
Step 15: Now follow the instructions as given there to select and copy text from Command Prompt.
Step 16: Once copied, paste that identifier token into the box at the bottom of that HTCDev page and then click Submit.
Step 17: You will receive an email by HTC (on the registered email) withalink to the second part of the instructions and your “Unlock_code.bin” file attached.
Step 18: Download “Unlock_code.bin” and save it in your Fastboot folder (C:fastbooot in our case).
Step 19: Now type the following command in Command Prompt and press Enter.
Step 20: Check your phone. Read on-screen instructions. Press Volume Up to accept and the Power button to confirm.
Now you are done unlocking your bootloader!
2) Installing Clockwork Mod
Step 1: Download and extract Hasoon2000′s All-in-One Toolkit.
Step 2: Start it up and click “CWM”, then click “Flash Recovey”.
Step 3: Follow the instructions given by the toolkit and install ClockWork Mod.
Step 1: Once done installing the clockwork mod select “Recovery” in the menu and you will be booted in ClockWork Mod.
Step 2: Choose “install zip from sdcard” and navigate to the ZIP file you downloaded and copied to your phone.
Step 3: Click on the ZIP file and it will be installed.
You have successfully rooted your HTC Desire C!
imobile istyle Q နဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 .ဖုန်းတွေကို အလွယ်တကူ Root လုပ်နည်း
Posted: 14 Apr 2013 05:32 AM PDT
imobile istyle Q နဲ့ စတဲ့ Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 ..စသည့်ဖုန်းတွေကို အလွယ်တကူ root
cpu driver တွေကို computer မှာအရင်သွင်းလိုက်ပါ ... ဒါမှ root လုပ်လို့ အောင်မြင်မှာပါ
ကျွန်တော်ကတော့ imobile phone တွေများအများဆုံးသုံးတဲ့ cpu driver တွေကိုစုပြီး တင်ထားပေးပါတယ်
အသုံးလိုသူများ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Cpu Driver ကိုဒေါင်းရန်
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Driver ဖိုင်းတွေကို သွင်းပြီပြီဆိုရင် Root လုပ်ဖို့ အတွက်
Root လုပ်မဲ့ ဖုန်းမှာ အရင်ဆုံး Settings > Develper > Usb နေရာတွေကို အမှတ်လိုက်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
root လုပ်ဖို့ အတွက် root ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ အထဲက Run Me နေရာမှာနှိပ်ပါ
အမဲရောင် CMD အကွက်တက်လာပါမယ်
1 nornal နေရာကိုနှိပ်ပြီ root မှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်က 1 ကိုနှိပ်ပြီ enter နှိပ်ပါ ဒါဆို CDM အကွက်ထဲက အစိမ်းရောင်စာတန်း Running....
ပေါ်လာရင် ဖုန်းမှာသွားကြည့်ပါ ( Do Not Restore & Restore My date ) စာတန်းတက်လာပါမယ်
ဒါဆို Restore My date စာတန်ကိုရွေးပြီ enter ဆက်နှိပ်ပါ CDM အကွက်က နောက်ထပ်စာတန်း
reboot your device 10 seconds .... စာတန်းတက်လာရင် ဖုန်းကိုပါဝါအမြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်ချက်ခြင်း
ပါဝါပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ CDM ကအလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမယ် စာတန်းတက်လာပြီး ရပ်နေရင် Enter ကိုဘဲနှိပ်ပေးပါ နောက်ဆုံ CDM အကွက်ပိတ်ပြီး ဖုန်း Reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင် Superuser app
Credit to : ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
ဝင်းကမ္ဘာကျာ် မှ ကူးယူဖော်ပြပေးသည်
Computer Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် အင်တာနက်မှ လေ့လာနည်း...
ဒီblog လေးကနေ ကျွန်တော်လည်းအင်တာနက်မှာ လုပ်သင့်တာတွေ
အများကြီးရှိနေသေးတဲ့ အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ် အရင်တုန်းက ချက်ပဲချက်နေမိတဲ့
ပြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေ မလေ့လာမိခဲ့လို့ လဲဝမ်းနည်းရပါတယ် ဒါပေမယ့်
အခုသိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ တော့
သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအရှုပ်ထုပ် လိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ကြရင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
မျှဝေချင်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် (အလွန်တော်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးများကို
မရည်ရွယ်ပါ) အပြုသဘောလေးနဲ့ ဝေဖန်ပေးကြပါလို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ် ဒီblog
ကို ရေးပေးတဲ့ web developer ei mg ကိုလည်းအထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MZ 3rd Anniversary အထိမ်းအမှတ်ပွဲရဲ့
နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ Open Discussion ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ပါခဲ့ပါတယ်...
အဲ့ဒီ အစီအစဉ်မှာ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကတော့ "Beginner ကနေ Professional ဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ" ဆိုတဲ့
Professional ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုခေါ်တာလဲ ဆိုတာကနေ စတင်ဆွေးနွေးလိုက်ကြတာ အတော် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်...
Professional ဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတိအကျအဖြေတစ်ခုကို
မပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် တက်ရောက်လာသူများအတွက် အကျိုးရှိခဲ့တဲ့
Professional ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ့် အချက်တွေထဲမှာ "စဉ်ဆက်မပြတ်
လေ့လာနေရမယ်" ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက် ပါဝင်ပါတယ်... အမြဲမပြတ်
တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် "စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေရမယ်"
ဆိုတာဟာ Beginner တွေသာမကပါဘူး၊ မိမိကိုယ်ကို ကျွမ်းကျင်သူလို့ ယူဆထားတဲ့
Professional များအတွက်ပါ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အားလုံး သိပြီးသားပါ...
မှာ ထိရောက်တဲ့ "စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာမှု" တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ Internet ကို ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ
ဆိုတာကို အဓိကထား တင်ပြသွားချင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာစတင်လေ့လာစအချိန်က လေ့လာဖို့အတွက် Resource ဆိုတာ
အတော်လေးရှားပါးပါတယ်... ကိုးကားစရာရဖို့အတွက် သင်တန်းတွေမှာ
ဆရာသင်သမျှတစ်လုံးမကျန် လိုက်လံမှတ်သားထားရပါတယ်... Programming
နဲ့ပက်သက်တဲ့ စာအုပ်အထူကြီးတွေကိုတွေ့မိရင် လိုချင်လွန်းလို့
ရင်တွေဘာတွေတောင် တုန်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲ့လိုစာအုပ်တွေက ဈေးသိပ်ကြီးလို့
အနားတောင်မကပ်နိုင်ပါဘူး... စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ရလိုက်ပြီဆိုရင်လည်း
ရွှေမန်ကျည်းတောင့်ရသလောက်ကို ၀မ်းသာရပါတယ်... စာအုပ်က သိပ်ရှားပါးတော့
ကိုယ့်မှာရှိရင် သူများကို မပေးချင်ပါဘူး... ကိုယ်တောင်မှ ခက်ခက်ခဲခဲ
ရထားရတာကိုး... သူများစာအုပ်ဆိုရင်လည်း တစ်ရက်လောက်ခဏလို့ ငှားပြီး
တစ်အုပ်လုံးကို မိတ္တူကူးယူထားရတာတွေ ရှိပါတယ်... အဲ့ဒီလောက်ထိ ကိုးကားစရာ၊
လေ့လာစရာ စာအုပ် နဲ့ Resource ရှားပါးပါတယ်...
နောက်ပိုင်း အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အလွယ်တစ်ကူရလာတော့ အင်တာနက်ကို လေ့လာဖို့အတွက်
အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်... အစပိုင်းမှာ လိုချင်တာတောင်မှ မရှာတက်ဆိုတော့
သိပ်မထိရောက်ပါဘူး... နောက်ပိုင်း သုံးတက်လာတဲ့အခါ အင်တာနက်ဟာ
သိပ်ကောင်းတဲ့ လေ့လာစရာ Resource ဖြစ်သွားပြီး အများကြီး
အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်... အခုချိန်မှာ အင်တာနက်မရှိပဲ အလုပ်လုပ်ဖို့
ဆိုတာနဲ့၊ အင်တာနက်မရှိပဲ လေ့လာဖို့ဆိုတာကို တွေးကြည့်လို့တောင်
MZ 3rd Anniversary ပွဲနေ့က အများကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်... "မိမိကိုယ်ကို
စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတယ်လို့ ထင်သလား? နေ့စဉ်တိုးတက်တာက မမြင်သာရင်တောင်မှ
ပြီးခဲ့တဲ့လကထက် ဒီလ ပိုမိုတိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်သလား?" ဆိုတဲ့
မေးခွန်းကိုမေးခဲ့ပါတယ်... "တိုးတက်နေပါတယ်" ဆိုတဲ့အဖြေကို ဖြေရဲတဲ့သူ
တစ်ယောက်တောင်မှ မရှိတဲ့အတွက် အံ့အားသင့်မိပါတယ်... လူကြားထဲမှာ
တိုးတက်နေပါတယ်လို့ ဖြေဖို့ မ၀ံ့ရဲတာဖြစ်နိုင်သလို၊ အမှန်တကယ်ကို
မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်နေတယ်လို့ "မထင်" တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... အဲ့ဒီမှာ
ပြန်ပြောဖြစ်တာက "ကနေ့ခေတ်လို အင်တာနက်
ရှိပြီး လေ့လာဖို့ Resource မရှားပါးတဲ့ အချိန်မှာမှ မိမိကိုယ်ကို
ပုံမှန်တိုးတက်နေတယ်လို့ မထင်ဘူးဆိုရင်တော့၊ ကျွန်တော်တို့
တိုးတက်နေရဲ့လား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လေ့လာနေသူးတိုင်း
နောက်ထပ် ထပ်မေးတဲ့ "ဒါဆိုရင် အင်တာနက်မှာ လေ့လာတဲ့အချိန်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့အချိန် ဘယ်ဟာကများလဲ? ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ဘယ်အပိုင်းမှာ
များနေတယ်ထင်လဲ?" ကိုတော့ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း "အချိန်ဖြုန်းနေတာက များနေတယ်" လို့
အင်တာနက်မှာ အချိန်ဖြုန်းတာကို လုံးဝအကျိုးမရှိတဲ့ အချိန်ဖြုန်းခြင်းလို့တော့ မပြောလိုပါဘူး... ဥပမာ
Social Network တွေမှာ အချိန်ကုန်နေခြင်းဟာ တစ်နည်းအားဖြင့်
အချိန်ဖြုန်းသလိုဖြစ်နေပေမယ့်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ
တိုးတဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းသစ်တွေ
အင်တာနက်ကို လေ့လာဖို့ချည်းသက်သက် သုံးရမယ်လို့ ဇွတ်ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး... နှစ်သက်သလို သုံးလို့ရပါတယ်...
ဟိုလိုပဲသုံးရမယ် ဒီလိုပဲသုံးရမယ်လို့ လိုက်ပြီး တာမြစ်ပိတ်ပင်နေလို့လည်း
ဘယ်သူကမှ နားထောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့
လက်တစ်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ အခွင့်အရေးကို မယူတက်လို့၊ အသုံးမချတက်လို့
(လူငယ်များအတွက်) အကျိုးမရှိသလို ဖြစ်နေမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ်...
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို အခုလို
ကျွန်တော်က Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကလည်း Web Developer
တွေအတွက်ပဲ အဆင်ပြေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... တစ်ခြားနယ်ပယ်တွေကို
အဓိကထားလေ့လာနေသူများအနေနဲ့ သင့်သလို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
၁.) နေ့စဉ်ဖတ်ရမည့်စာရင်းတစ်ခု ထားပါ
တစ်ချို့ Tutorial Web Site တွေနဲ့ နည်းပညာ Blog တွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ Update အသစ်တွေ တက်လေ့ရှိပါတယ်...
ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ အဲ့ဒီလို Web Site တွေကို စာရင်းတစ်ခု
Web Developer တွေအတွက်ဆိုရင် Smashing
Magazine လို Site မျိုးနဲ့ Sitepoint
လို Site မျိုးတွေဟာ နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ Site တွေ ဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီ Site တွေဟာ Multi Author Blog တွေဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ (Web
Development ကို အသားပေးတဲ့) နည်းပညာ Article တွေတင်ပေးနေတဲ့ Site
တွေဖြစ်ပါတယ်... ဒီလို Site မျိုးက Article တွေဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို
ထဲထဲဝင်ဝင် သိဖို့ ကူညီပေးလေ့ရှိပါတယ်... သူတို့ Article တွေက ရှည်ပြီး
တစ်ခါတစ်ရံ လေးနက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တက်တဲ့အတွက် စာဖတ်မပျင်းဖို့တော့
Site မျိုးကတော့ Tutorial Site တစ်ခုဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ Free Tutorial
လေးတွေ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်... သူတို့တင်ပေးသမျှ Tutorial တွေက တစ်ခုမှ
ပစ်ရက်စရာမရှိပါဘူး... ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်တာချည်းပါပဲ...
OS News တို့ CNet တို့လို သတင်း Site တွေကလည်းပဲ
နေ့စဉ် ကြည့်ရှု့နေဖို့ လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်... အဲ့ဒီ Site တွေက ကိုယ့်ကို
ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်မသွားစေဖို့
ကိုယ့်မှာ အဲ့ဒီလို နေ့စဉ်ဖတ်သင့်ပါတယ်လို့ ယူဆတဲ့ Web Site စာရင်းတစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း အခြားသူတွေကို
သူတို့ရေးသမျှ နေ့စဉ် တစ်လုံးမကျန် လိုက်ဖတ်နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး... Update တွေကိုကြည့်ပြီး
ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်အတွက် အလှမ်းဝေးနေတဲ့အရာ
သို့မဟုတ် လုံးဝစိတ်မ၀င်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့ ဖတ်ဖို့မလိုပါဘူး...
နေ့စဉ်ဖတ်ရမယ့် Site ၁၀ခုလောက်ထားပြီး အနည်းဆုံး ခေါင်းစဉ်တွေလောက်
၂.) RSS Reader တစ်ခု သုံးပါ
ဖတ်ရမယ့် Site စာရင်းထားပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် တစ်ချို့
Site တွေက ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိပေမယ့် နေ့စဉ် Update မဖြစ်ပါဘူး... ပြီးတော့
ကြည့်ချင်တဲ့ Site တွေများလာတဲ့အခါ အဲ့ဒါတွေကို နေ့တိုင်းသာ
အကုန်သာလျှောက်ကြည့်ရရင် စာဖတ်တဲ့စခန်းကိုမရောက်ပဲ Web Site တွေ
ဖတ်ချင်သမျှ Web Site တွေအားလုံးရဲ့ Update တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစုစည်းစည်း
ဖတ်ဖို့အတွက် RSS Reader တွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်... RSS Reader
သုံးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ် Subscribe လုပ်ထားတဲ့ Web Site တွေမှာ Content
Update ဖြစ်မဖြစ် တစ်ခုခြင်း လျှောက်ကြည့်နေစရာ မလိုအပ်တော့ပါဘူး...
Content Update ဖြစ်တာနဲ့ Update တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ RSS Reader ထဲမှာ
ကနေ့ခေတ်မှာ RSS Feed Support မလုပ်တဲ့ Web Site ဆိုတာ အတော်လေး နည်းသွားပါပြီ...
Reader အနေနဲ့ Google
ကို Recommend ပေးချင်ပါတယ်... လူတိုင်းနီးပါးမှာ Google Account
ရှိနေတဲ့အတွက် ထပ်ပြီးတော့လည်း Register လုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူး... RSS
Reader မသုံးဖူးသူတွေအတွက် Feed တွေ ဘယ်လို Subscribe လုပ်ရမလဲဆိုတာ
မရှင်းပြတော့ပါဘူး... Google Reader ကိုသာ ၀င်လိုက်ပါ... Google ရဲ့ Usable
ဖြစ်တဲ့ အသွင်အပြင်ကြောင့် အလိုလို နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
Alternate Reader အဖြစ်နဲ့ Bloglines
RSS Reader လက်ရှိသုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်...
ကိုယ်ဖတ်နိုင်သလောက်သာ Subscribe လုပ်ပါ... လောဘတစ်ကြီး Site
တွေအများကြီးကို Subscribe လုပ်မထားပါနဲ့... Subscribe လုပ်ထားပြီး
မဖတ်နိုင်ရင်အလကားပါပဲ... Feed Update တွေကိုလည်း နေ့စဉ်
ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်... မဖတ်ချင်တဲ့ Feed တွေ၊ မဖတ်နိုင်တဲ့ Feed ကို
ထားမနေပါနဲ့ Un-Subscribe သာလုပ်ပစ်ပါ... နေ့စဉ်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ တစ်လုံးမကျန် လိုက်ဖတ်နေဖို့မလိုပါဘူး... အနည်းဆုံး
ခေါင်းစဉ်တွေလောက် လိုက်ဖတ်သွားနိုင်ရင်တောင် မဆိုးပါဘူး...
ကိုယ်တစ်ကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာမှ အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်...
၃.) တစ်နေ့ အနည်းဆုံး (၁)နာရီ စာဖတ်ပါ
ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ တစ်နေ့ကို (၁)နာရီလောက်တော့ စာဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်... ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ကနေ
ဘယ်အချိန်ထိ စာဖတ်မယ်ဆိုပြီး တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
အလေ့အကျင့်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီး စာဖတ်ရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်...
အလုပ်တွေမစခင် (၉)နာရီကနေ (၁၀)နာရီအထိကု စာဖတ်ဖို့ သက်သက်ပဲ
အသုံးပြုပါတယ်... အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ RSS Reader ထဲမှာ ရောက်နေသမျှ
Update တွေကုန်အောင်ဖတ်ပါတယ်... တစ်နေ့ကို Update (၁၂၀) လောက် ရလေ့ရှိပြီး
(၁၀၀) လောက်ကို အကြမ်းဖျင်းသာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်... (၂၀) လောက်ကိုတော့ အသေးစိတ်
အဲ့ဒီလို နေ့စဉ် (၁)နာရီလောက်ပဲ မဖြစ်မနေ အချိန်ပေးသွားပါ... (၆) လလောက်ကြာတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ရင် အများကြီးတိုးတက်လာတာကို တွေ့လိမ့်မယ်လို့
၄.) Online Forum တွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပါ
Online Forum တွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းကို
တိုးမြှင့်တဲ့ဖို့အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်... သိချင်တာရှိရင်လည်း
မေးလို့ရသလို၊ သူများတွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေကနေ ကိုယ့်အတွက်
စိတ်ဝင်စားစရာအသစ်တွေ ရနိုင်သလို မသိသေးတာတွေလည်း အများကြီး
ကိုယ်သိထားတာတစ်ခုရှိလို့ သူများမေးတာကိုဖြေတော့မယ်ဆိုရင်လည်း စကားပြောတာမဟုတ်ပဲ စာနဲ့ရေးတာဖြစ်လို့
တိတိကျကျ ရေးသားဖို့လဲလိုအပ်လာပါတယ်... အဲ့ဒီအတွက်လည်း သိထားပြီးသားကို
ဖြေပေးတာဖြစ်ပေမယ့် စာပြန်ဖတ်ဖို့ လိုအပ်တက်ပါတယ်... ပြန်ဖတ်ပြီး
သေချာတော့မှ အသေးစိတ်ဖြေပေးရတာဖြစ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို နဂိုကထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိရှိသွားတက်ပါသေးတယ်...
Forum တွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေးတာဟာ
အရည်အချင်းတိုးမြှင့်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ယုံမက အသိမိတ်ဆွေတိုးပွားပြီး
၅.) Social Bookmark Site တွေသုံးပါ
တွေကို ဖတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့ Digg တို့ Reddit တို့လို Social Bookmark Site
တွေကနေ စကြည့်သင့်ပါတယ်... Web Site တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Blog Post တစ်ခုကို
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Link ကို Social Bookmark Site တွေမှာ တင်ပေးလို့ရပါတယ်...
အဲ့ဒီလို တင်ပေးလို့ရတဲ့အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူတွေက Link တွေ
ဒါကြောင့် Social Bookmark Site တွေဟာ ဒီနေ့အတွက် ကမ္ဘာမှာ ဘာတွေလူကြိုက်များနေလဲဆိုတာကို စုစည်းပေးထားတဲ့ Collection
ကြီးတွေလို ဖြစ်နေပါတယ်... ဘာကောင်းလဲ ကိုယ်လိုက်ရှာနေစရာမလိုပဲ
အကောင်းတစ်ကာ့အကောင်းဆုံးတွေကို Social Bookmark Site တွေမှာ
စုစည်းထားပြီးသား ရနိုင်ပါတယ်... Popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့ Latest အဖြစ်ဆုံးက
Home Page မှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်...
Link တွေက သိပ်များလွန်းလို့လည်း စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး... ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Category ပဲရွေးပြီး
ကြည့်လို့ရပါတယ်... ဒါကြောင့် Social Bookmark Site တွေဟာလည်း နေ့စဉ်
ကြည့်ရမယ့် စာရင်းထဲမှာ ပါ ပါတယ်...
၆.) Google ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုတက်အောင် လုပ်ပါ
Online ကို လေ့လာဖို့အတွက် အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကတော့
Google ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုတက်ဖို့ပါပဲ...
ကနေ့ခေတ်မှာ လေ့လာစရာတွေက များလွန်းလှပါတယ်... Professional တစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်လည်း
တစ်မျိုးတည်း တစ်ခုတည်းကို တက်နေလို့ မရတော့တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလောက်များတဲ့လေ့လာစရာတွေထဲမှာ ဘယ်သူကမှ အားလုံးကို တစ်ခုမကျန်
လေ့လာဖို့လိုသလို jQuery ကိုလည်း သိထားရပါဦးမယ်... Web 2.0 တို့ Ajax
တို့လို နည်းပညာတွေကို သိထားဖို့လိုအပ်သလို HTML5 မှာပါဝင်လာတဲ့ Feature
အသစ်တွေကိုလည်း သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်... PHP လို Server Side Technology ကို
သိထားဖို့လိုအပ်သလို MySql လို Database Server တွေအကြောင်းသိဖို့လည်း
လိုအပ်ပါတယ်... MVC လို Pattern မျိုးကို နားလည်ထားဖို့လိုသလို Web
Development Framework တွေအကြောင်းလည်း သိထားရပါဦးမယ်...
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး... နောက်ထပ် အများကြီး အများကြီး
ကျန်ပါသေးတယ်... ဒီလောက်အများကြီး သိထားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ CSS မှာ
ရှိသမျှ Property တွေကို အကုန်အလွတ်ကျက်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် အချိန်တွေ
ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်... အလွတ်မှတ်နေဖို့မလိုပါဘူး... သဘောတရားပဲ
နားလည်ထားဖို့လိုပြီး အသေးစိတ်ကို လိုအပ်လာတော့မှ လိုအပ်သလို
Google ဟာ ရှာဖွေတက်သူအတွက် အမှန်တစ်ကယ်အကျိုးရှိတဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်... သိချင်တာတစ်ခုကို
စာအုပ်ထဲမှာရှာရင် တစ်မျိုးပဲသိရပါတယ်... Google မှာ ရှာရင်တော့
နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ပုံစံစုံ ရှင်းပြထားတဲ့ အဖြေတွေကို ရနိုင်ပါတယ်...
ရှာတက်ဖို့ကလည်း အရေးပါတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါတွေဟာ Professional ဖြစ်လိုသူတစ်ယောက်အတွက် အင်တာနက်ကို ထိထိရောက်ရောက်
အသုံးပြုပြီး ဘယ်လို လေ့လာရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်က Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ နည်းလမ်းတွေက
Professional Web Developer ဖြစ်လိုသူတွေနဲ့သာ
ဒါကြောင့် တစ်ခြားနယ်ပယ်က Professional များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အင်တာနက်ကို
လေ့လာဖို့အတွက် ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို
4Google +000
SVCHOST.EXE က Flash Drive များမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာဆီသို့အချိန် မရွေးရောက်နိုင်
တကယ်တော့ SVCHOST ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ System ထဲမှာအမှန်တကယ်အလုပ် လုပ်နေတဲ့ File ပါ..ခုပြောတဲ့ SVCHOST.EXE ကတော့ သူလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပုံမှားရိုက်တာပေါ့..Process ထဲကနေ သူ့ကို Kill မယ်ဆို အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ System File နဲ့မှားယွင်းတတ်ပါတယ်..အချို့ကတော့ သူ့ကို Process ကနေ Kill လိုက်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူကပြန်တက်လာပါတယ်..Antivirus ကလည်းသူ့ကိုရှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက System File ယောင်ဆောင်ထားတာကိုး..
ဘယ် User Name နဲ့ဝင်သလဲဆိုတာအရင်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်..
ဘယ်ဆိုဒ်ကဖြစ်ကြောင်းမဖော်ပြပေးနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် အားလုံးအတွက်ပါ